Soomaali fal xatooyo ah lagu eedeeyay oo maanta maxkamad lasoo taagaayo | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Soomaali fal xatooyo ah lagu eedeeyay oo maanta maxkamad lasoo taagaayo
Soomaali fal xatooyo ah lagu eedeeyay oo maanta maxkamad lasoo taagaayo
Saddex muwaadin oo Soomaali ah ayaa booliiska Jasiirada Malta u xireen in lala xiriirinaayo in ay ka qeybgaleen koox hubeysan oo weerartay dukaan ku yaalla Magaalada St. Julian, islamarkaana ay jabsadeen ayna qaateen wixii yaallay.
Booliska ayaa sheegay in abbaaraha 3-dii subaxnimo ee 21-ka Oktoobar ee sanadkan nin 27 jir ah oo u dhashay Hungary uu soo galay saldhiga booliska ee St. Julian si uu ugu wargaliyo in ay soo weerareen rag hubeysan ayna dhac u geysteen.
Baaritaano hordhaca ah oo ay Sameeyeen Ciidanka booliska ayaa lagu soo qabtay Saddex qof oo Soomaali ah oo kasoo dhexmuuqday kaamirada qarsoon xilli ay ku howlnaayeen in ninka soo dacwooday ay ka furtaan saacaddiisa, halka kuwo kalena ay galeen dukaanka.
Dhibanaha ayaa sheegay in mid ka mid ah raggaas uu ka tuuray sagxadda, halka kuwa kale ay xadeen saacaddii ninka oo ay jeebkiisa ka faaruqiyeen ka hor inta aysan ka baxsan goobta.
Saddexda nin waxay ka yimaadeen Soomaaliya waxayna da’doodu u dhaxeysaa 24 illaa 26 sano sida lagu sheegay war kasoo baxay booliska.
Waxaa la filayaa in maxkamad la soo taago maanta oo talaado ah halka baaritaanada ay sii socdaan.